Ebe kacha mma na Jávea | Njem akụkọ
Ebe kacha mma na Jávea
Mariela Carril | | Almería, Osimiri
North nke Alicante bụ obodo nke Jávea, saịtị dị n'ụsọ oké osimiri ọmarịcha ụtọ ihu igwe dị mma n'afọ niile, nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-ahọrọ nke ukwuu site na ndị chọrọ ịnụ ụtọ ezumike dị mma. Ógbè Jávea na-agba kilomita 20 a na-ejupụtakwa ya na osimiri.
Taa, Ebe kachasị mma na Jávea.
2 agba ọcha
5 ájá ájá
8 Osimiri Gravel
9 Benisero Beach
10 Minister's Cove
11 Osimiri Pope
Dị ka anyị kwuru, ọ bụ a obodo dị n'ụsọ oké osimiri dị na Costa Blanca, na Alicante, na ihe dị ka kilomita 90 site na Ibiza. Odika ọkara nke ndị bi na ya bụ ndị mba ọzọ, ọ dị ka ndị bekee na ndị German pensioner ka oyi na-atụ ike na-abịa ebe a ugboro ugboro.
Dị ka ọtụtụ n'ime obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri na Spain, na na mba ndị ọzọ dị na Europe, ọrụ ugbo na ịkụ azụ enyela ụzọ njem nlegharị anya dị ka engine nke akụ na ụba mpaghara. Ọzọkwa, omume a malitere na 60s mgbe ndị njem na-amalite ịchọpụta ụdị dị iche iche na ịma mma nke osimiri ya.
Ya mere, Kedu ụlọ kacha mma na Jávea?
Maka ọtụtụ ndị ọ bụ otu n'ime osimiri kacha mma na obodo na otu n'ime ndị kasị ewu ewu. Echiche ya bụ ihe dị egwu. Anyị na-ekwu maka ya obere oghere atọ, dị n'akụkụ ibe ha. A na-akpọ isi ọdụ ụgbọ mmiri Blanca ma dị ihe dị ka mita 300 n'ogologo. N'ụzọ doro anya, a na-akpọ ya n'ihi na nkume nkume na okwute ndị na-eme ya bụ nke agba ahụ.
Ọgba mmiri na-ewu ewu ma mara n'ihi na ọ dị mfe ịnweta. Ugbu a, ka ị mata akụkụ ndị ọzọ na-eme ya, ị ga-eme mgbanwe ole na ole. Nke Cove I Ọ dị ihe dịka mita 80 site na njedebe nke Avenida Ultramar, okporo ụzọ na-aga Cala Blanca. Ọ nwere ohere nke dịkwa mfe na onye nwere ike ịga Mirador de Cala Blanca na-enweghị nsogbu ọ bụla. Ọ bara uru? O doro anya.
Ihe na-esote bụ Caleta II, nwere mmiri mara mma na kristal na mbara ala na-amaghị nwoke. Ọ dị ntakịrị, dị ntakịrị karịa abụọ ndị ọzọ, ma ị nwere ike ịbanye n'ebe ahụ na ụkwụ site na Caleta I. Ọ bụrụ na-amasị gị echiche sitere n'elu, ị ga-arịgo ugwu na-ekpori ndụ na ha.
La French Cove Ọ bụ ihe kasị njọ n'ime otu ahụ na ịbịaru ebe ahụ adịghị mfe, ọ bụ ezie na ọ gaghị ekwe omume ma ọlị. Ọ bụ obere paradaịs zoro ezo nke ị ga-esi na Caleta II na-aga site na nkume ndị dị n'oké osimiri. Njem dị mma!
A makwaara ya site na aha Barraca Cove, maka ụlọ ndị ọkụ azụ ọdịnala dị na mpaghara ahụ, ogige, n'akụkụ oke osimiri. A na-eji ụgbọ ala na ụkwụ erute ya. Na ụkwụ, si Mirador de la Cruz del Portitxol na ụgbọ ala, si n'okporo ụzọ na-aga Cabo de la Nao.
Ebe mkpuchi a mara mma nke ukwuu, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịga n'oge. Ebe a ị nwere ike snorkel, ụfọdụ mmiri mmiri na igwu mmiri ebe ọ bụ na mmiri na-apụta ìhè na nke ọma na agba.
Onye ọ bụla na-ekweta na ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma nke niile na kwa, Ọ bụ otu n'ime ebe kacha mma na Spain iji snorkel. Kedu ka ị ga-esi ruo ebe ahụ? Site na ụgbọ ala, ụkwụ na ụgbọ ala, na-ejikọta ihe niile. Ị dọba ụgbọala ahụ wee gaa ije ma ọ bụ buru bọs nke obodo Jávea nyere.
N'ụzọ ọ bụla, ị ga-enwe ụfọdụ nnukwu echiche nke odida obodo, na ụzọ na otu ugboro n'ime oghere n'onwe ya. Mmiri ahụ magburu onwe ya, isi ihe iri, nke doro anyagị ma hapụ ka ịhụ ọtụtụ minnows na-egwu mmiri n'akụkụ ala. Ọ mara mma. Amen to the ọnụ ọnụ ugwu na-adọrọ mmasị nke gbara ya gburugburu.
Ọ bụ cove na-arụ ọrụ, nke na-enye egwuregwu mmiri, ya mere e nwere ndị mmadụ na-akpụ akpụ na ụzụ. Ị nwere ike ime ndakpu mmiri, snorkeling, paddle surf, kayak…
Na Jávea e nwere ụdị osimiri dị iche iche, ájá na okwute, dịka ọmụmaatụ, mana Arenal bụ otu n'ime oke osimiri dị ọcha ihe ị ga-ahụ ebe a Ọ bụ ihe pụrụ iche, nke kachasị ukwuu, ọzọ, na nwa oge, n'ihi agba ahụ, ị ​​na-eche na ị nọ na Caribbean ma ọ bụ Polynesia.
Ọ bụ osimiri dị jụụ na nke dị jụụ, ikwu okwu, anwụ na-acha, gụọ ihe ma ọ bụ ije ntakịrị. Nwee a eme mkpagharị, na cafes, ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụfọdụ ụlọ ahịa na-agbazite ngwá egwuregwu mmiri. Ma ị nwere echiche Ugwu Montgo.
Ihe mbụ ị ga-ekwu gbasara osimiri a bụ nke ahụ a na-enwekarị slippages, ya mere ha na-emechikarị ya. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịlele tupu ịga. Ọ pụtaghị na ị gaghị enwe ike ịbanye, mana ihe ize ndụ dị n'ihe ize ndụ nke gị. Ọ bụ a obere mkpuchi na aja ọcha, Ọ dị n'ihu Cabo de la Nao na Ọ bụ osimiri gba ọtọ otu n'ime ihe kacha mma na Javea. O nwere nnukwu ọnụ ọnụ ugwu na mmiri na-acha anụnụ anụnụ. Ndị mmadụ na-arị elu mgbidi nkume ma ọ bụ na-agba snorkeling.
Ọ nweghị ndị nchekwa ma ọ bụ ị nwere ike ịgbazite ebe nchekwa anyanwụ ma ọ bụ nche anwụ ma ọ bụ oche osimiri, mana na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 300 ma ọ bụrụ na i were ihe gị, ị ga-enwe ọmarịcha oge. Ọgba mmiri ahụ adịghị anya na Mirador de Ambolo, a na-akpọkwa ya n'ihi na ọtụtụ narị afọ gara aga enwere ọtụtụ ụlọ nche n'ụsọ oké osimiri iji dọọ aka ná ntị banyere mbata nke ndị ohi.
Ọ bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, nke nwere n'ikpere mmiri nke nwere gravel na okwute. Ị nwere ike iru ebe ahụ na-aga na Mirador de la Cruz del Portitxol, n'okporo ụzọ eke. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahọrọ ya igwu mmiri ma ọ bụ snorkel.
Dị ka aha ya na-egosi kama ájá ọ bụ gravel. Bụ na-esote marina site n'obodo ahụ na mpaghara ịkụ azụ ochie nke Duanes de la Mar. Ọ dị mfe ịnweta ya na n'ihi ọnọdụ ya na ewu ewu ya. O nwere ihe niile maka ndị njem nleta.
La Grava bụ osimiri nke mmiri dị jụụ na kristal doro anya na ha na-anya isi si Blue ọkọlọtọ. Enwere nkwụ na njem ya, ahịa nka na ogige mmiri na-emeghe n'oge okpomọkụ nke dị mma ma ọ bụrụ na ị na-aga na ụmụaka.
osimiri a bụ naanị maka ndị egwuregwu. Ọ bụ a oghe osimiri, ya mere ifufe siri ike na-efe nke dị mma maka ịkwọ ụgbọ mmiri na kitesurfing. Ọ dị mita 300 site na ọdụ ụgbọ mmiri na egwuregwu ndị a ị nwere ike itinye kayak, ịkwọ ụgbọ mmiri na ski jet.
N'ọnụ ọnụ osimiri enwere ọtụtụ ụlọ mmanya osimiri ebe ị nwere ike iri nri, azụ na nri mmiri dị na menus niile, osimiri na-enyekwa ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ mposi ọha, Ụzọ osisi iji zere ọkụ ụkwụ gị na mgbazinye ngwá ọrụ osimiri.
The Benissero osimiri gbatịrị a bit enye udi na Mbụ Muntanyar, 1900 ọmarịcha mita na-eru Parador de Jávea. Bụ a osimiri nwere mmiri turquoise na okwutes, mara mma nke ukwuu, onye transperent mmiri ekwe omume nke snorkeling na ndakpu mmiri.
Ọ bụ obere osimiri Ọ dị na njedebe nke osimiri Primer Muntanyar, n'azụ Parador de Jávea. Ọ dị obere na okwute ma maa mma nke ukwuu. Ọ nwere ọtụtụ ọdọ mmiri nwere fauna na eke ọdọ mmiri.
Franco nwere Villa ebe a nke o mechara nye Navarro Rubio, onye minista ego ya. N'ihi ya aha. Ọ dịghị onye bi n'ụlọ a taa, ma ị nwere ike ịhụ ya site n'ụsọ osimiri. Ọ bụ osimiri dị jụụ na-enweghị ụdị ọrụ ọ bụla, yabụ ọ bụrụ na ị kpebie ịga ị ga-ewere ihe niile.
N'ezie, na njedebe nke mkpuchi ahụ, e nwere echiche mara mma nke ị nwere echiche dị egwu banyere osimiri Arenal.
Nke a osimiri na-mara aha nke Tango osimiri. Ọ dị na nsọtụ ugwu nke obodo ahụ. n'akụkụ ndịda nke Cabo de San Antonio Marine Reserve. Ọ nwere obere ọnụ mmiri abụọ nwere nnukwu aja na mmiri doro anya kristal.
Obere ma mara mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Almería » Ebe kacha mma na Jávea